Trendy Tech uye Huru Dhata: Chii Chaunofanira Kutarisa MuMusika Ongororo mu2020 | Martech Zone
Muvhuro, March 2, 2020 Muvhuro, March 2, 2020 Sudip Saha
Izvo zvakapfuura zvaiita senge remangwana riri kure rasvika: Gore ra2020 rava kutosvika. Vanyori vengano dzeSainzi, masayendisiti ane mukurumbira, uye vezvematongerwo enyika vagara vafungidzira kuti nyika ingatarise sei uye, tichiri kungodaro tisina mota dzinobhururuka, makoloni evanhu paMars, kana migwagwa mikuru yetubular, kufambira mberi kwetekinoroji kwanhasi kunoshamisa zvechokwadi - uye kuchango ramba uchiwedzera.
Kana zvasvika pakutsvagisa musika, hunyanzvi hwetekinoroji yegumi nyowani inounza nematambudziko anozoda kukundwa kuti uwane kubudirira kusingaperi. Heano mamwe eakakurumbira nyaya ayo ekutsvaga kwemusika achada kutarisa mu2020 uye kuti makambani anofanirwa kusvika kwavari sei.
Kuenderera Mberi Kugarisana neAI
Maitiro akakosha kwazvo emakore gumi anotevera ichave iri kuwedzera mberi kwehungwaru hwekugadzira mumaindasitiri ese. Muchokwadi, kushandisa mari kwese kuAI uye masisitimu ekuziva anotarisirwa kudarika madhora makumi mashanu nemashanu emadhora muna52, neongororo ichangobva kuitwa ichitsvaga kuti 2021% yevaongorori vemusika vanotenda kuti AI ichaita musika wakanaka.
Kunyangwe izvi zvingaite senge zvinoratidza padhuze nemuchina-inotungamirwa muhofisi kutora, isu tichine nzira refu yekuenda michina isati yakwanisa kudzora nzvimbo yebasa - pane zvinhu zvakawandisa kunze uko izvo AI zvisingakwanise kuita.
Mumunda wekutsvaga mumusika, musanganiswa wezvakajairika uye AI-yakavakirwa maturusi ekutsvaga inodiwa kuitira kuti inyatso shanda. Kufunga shure kweizvi ndekwekuti, kunyange kufambira mberi muAI tekinoroji kwave kuchishamisa, zvakadaro hazvigone kudzokorora kunzwisiswa kwevanhu kana kupa zvakadzama nzwisiso muzvinhu zvakasiyana zvekunze zveindasitiri yakapihwa.
In kutsvakurudza misika, AI inoshandiswa zvakanyanya kuita mabasa akaderera anosunga nguva yevanotsvagurudza - zvinhu zvakaita sekutsvaga sampuro, kuongorora nzira, kuchenesa data, uye ongororo yedata isina mbichana, kusunungura vanhu kuti vashandise pfungwa yavo yekuongorora kuita mamwe mabasa akaomarara. Vatsvakurudzi vanobva vakwanisa kupa zvizere ruzhinji rweruzivo rwavo rwakakura kududzira mafambiro uye nekupa ruzivo - mazhinji acho anounganidzwa kuburikidza nemichina yekushandisa.
Muchidimbu, AI tekinoroji inogona kuwana kuwanda kwedata mune pfupi nguva. Zvisinei, haisi nguva dzose data rakakodzera - uye apa ndipo panouya pfungwa dzevanhu kuti vawane dhata rakakosha kwazvo rekushandisa pakutsvagisa musika. Kushandisa kusimba kweAI uye huchenjeri hwebhizinesi revanhu muzvinhu zvavo zvechisikigo zvinopa makambani ruzivo rwekuti vangadai vasina kuwana zvimwe.
Kuchengetedzwa kweData uye Kujeka muDhijitari Age
Nenyaya nyowani yekuvanzika inoita kunge gore rega rega, kuchengetedzeka kwedata uye kuwedzera kunoguma kwehutongi inyaya hombe munenge indasitiri yega yega inobata data revatengi. Ruzhinji kusavimba kupa ruzivo rwavo inyaya inopisa iyo yega yekambani yekutsvagisa misika inoda kufunga nezvayo ikozvino uye mune ramangwana.
Izvi zvakakosha zvakanyanya mugore rinouya. 2020 ichaunzawo zviitiko zvikuru zviviri zvepasirese izvo zvingangozadzwa nemushandirapamwe wekusazivisa nezvevanhu vatatu: Brexit nesarudzo yeUnited States. Kujeka kubva kumakambani ekutsvagisa musika chichava chakakosha: Makambani anofanirwa kuratidza pasirese kuti njere dzavanowana dzinozoshandiswa sesimba rezvakanaka kusimudzira hupenyu hwevanhu pane kuti vashandiswe mukuparadzira. Saka makambani anogona sei kuchinjika nekuwanazve kuvimba uku muchiedza chemamiriro ekunze azvino?
Kuti usvike pagakava remitemo, makambani ekutsvagisa misika anofanira kutora mukana wekugadzira kodhi yekushandisa zvine mutsindo kwedatha. Nepo masangano ekutsvagisa akadai seESOMAR naMRS akareba achitsigira mamwe maratidziro emakambani ekutsvagisa misika kuti vateerere kana zvasvika pakugadzirisa nyaya idzi, panofanirwa kuve nekudzokororwa kwakadzama kwetsika kana uchiita ongororo.
Mhinduro ndiyo yehupenyu huni hwekutsvaga mumusika, kazhinji hunowuya muchimiro cheongororo idzo dzinoshandiswa kugadzirisa zvigadzirwa, mutengi kana mushandi kubatikana, kana zvimwe zvakawanda zvekushandisa. Zvinoitwa nemakambani nedata rakawanikwa kubudikidza nekutsvagisa uku - uye zvinotonyanya kukosha, zvinoburitsa pachena sei kune avo vavari kutora data kubva - zvakakosha kumisangano yekutsvagisa mune ramangwana.
Kana zvasvika kune zvakavanzika zve data, blockchain inogona kunge iri mhinduro yekuona vatengi kuti data ravo riri kubatwa zvakachengeteka uye pachena. Blockchain yatowana mukurumbira seimwe yehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji yezana ramakumi maviri nemasere uye, muna 21, kukosha kwe blockchain kunongowedzera sezvo maindasitiri matsva atanga kuzviisa mumasisitimu avo ekudzivirira dhata. Iine blockchain, data remushandisi rinogona kuchengetedzwa uye pachena kuunganidzwa nemakambani ekutsvaga emusika, kuwedzera kuvimba pasina kudzikisira kushanda kwedata.
Ramangwana Rakajeka re5G Data Kuunganidzwa
5G ndeyekupedzisira pano, nemakambani ekufona achiramba achiwanika kuwanikwa mumaguta pasi rese. Kunyangwe zvichizotora imwe nguva kuti uwane iyo yakakosha kwazvo mabhenefiti, mota dzisina kutyaira, isina waya VR yemitambo, marobhoti ekudzora kure, uye maguta akangwara chikamu chenguva yemberi isingatendeseke inotungamirwa ne5G tekinoroji. Nekuda kweizvozvo, makambani ekutsvagisa musika anozoda kudzidza maitiro ekushandisa 5G isina waya tekinoroji mumazano avo ekuunganidza data.
Iko kuwirirana kuri pachena kune kutsvagisa kwemusika kuchave kuwedzera kwehuwandu hweongororo dzakapedziswa kuburikidza nhare mbozha. Sezvo vatengi vachizokwanisa kuona kukurumidza kwakanyanya pane kwavo nhare mbozha, ivo vanowanzo mukana wekuwana ongororo pane nhare mbozha. Asi pamwe nekuwedzera kwekushandisa kwema smart zvishandiso mumotokari, midziyo yemumba, masystem epamba, uye mabhizinesi, chiyero chekugona kuunganidzwa kwedata chakanyanya kuwedzerwa. Kutsvaga kweMusika kunoda kutora mukana weizvi.
Kubva pane zvigadzirwa zvetekinoroji kune shanduko munzira iyo vatengi vanoita nayo kune data, 2020 ichaunza pamwe nayo shanduko zhinji idzo makambani ekutsvagisa emusika achada kutevedzera. Nekuramba uchichinjira kufambiro mberi kwetekinoroji nekugadzirisa marongero avo, kutsvagisa kwemusika kuchave kwakanyatsogadzirira kubudirira izvozvi uye mune mamwe gumi emakore
Tags: 5gchakagadzirwa njerechengetedzoPachena
Sudip Saha, COO ye Ramangwana Musika Kunzwisisa, mubairo-unohwina musika kutsvagisa uye kubvunza femu. Bhizimusi rinotungamira mukukura rine ruzivo rwakakura mukutsvagisa musika uye manejimendi manejimendi pamatanho muAPAC, EMEA, uye maAmerican, Sudip mutendi akasimba uye mutsigiri wehunyanzvi-hwakagadziriswa mhinduro, ichisimbisa mukugadzira mhinduro dzakagadziriswa kusangana dzakasiyana siyana mutengi zvinodiwa .